Maska intee le'eg ayuu socon karaa? Ma Loo Baahan Yahay In La Kaydiyo Maaskarada?
Maska intee le'eg ayuu socon karaa? Ma Loo Baahan Yahay In La Kaydiyo Maaskarada? Sababtoo ah cudurka faafa ee cusub ee ku dhaca sambabka, ayaa wajiyadu xiran yihiin ku dhowaad nus sano. Illaa iyo hadda, in kasta oo cudurku uusan weli dhaafin, xaaladaha qaarkood, in kasta oo waji-furka si habboon looga saari karo, haddana weli si buuxda ugama bixi karno ilaalinta ...